Xukuumada Eritrea oo Soo Abaabulaysa Qaraxyo Lala Beegsanayo Magaalooyin ka Mid ah Dhulka Somalida Ogadeeniya – Rasaasa News
Nov 21, 2009 Eritrea, Puntland, somali land
Ras: Xukuumada Eritrea oo diyaar garow xoogan ugu jirta in ay Aafo ka abuurto gudaha Ogadeeniya, warar aanu ka helayno wariye bogga rasaas.com u jooga dalka Eritrea, wuxuu soo sheegay wariyuhu, in xukuumada Eritrea ay qorshaynayso in ay samayso qaraxyo ka dhaca dhawr magaalo, oo ay ugu talo gashan tahay in ay iskaga hor keento maamulka Kaalinka 5aad iyo dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Xukuumada Eritrea ayaa waxay u yeedhay 2 todobaad ka hor Jwxo-shiil iyo Maadey, oo iyagu ah rag u shaqeeya xukuumada Eritrea, iyaga oo adeegsanaya magaca ururka ONLF, oo isagu maanta ah mid meesha ka sii baxaya oo ay ummada Somalida Ogadeeniya gacmaha ka laabatay. Xukuumada Eritrea ayaa si xun u adeegsanaysa magaca ururka ONLF, oo ay iyadu sabab u tahay burburkiisa kana dhigatay magac ay kula dagaalanto xukuumada Itobiya, iyada oo aan dan ka lahayn waxyeelada ummada Somalida Ogadeeniya.
Xukuumada Eritrea ayaa waxay hub, qalab isgaadhsiin, lacag iyo saraakiil maamulba u soo dirtaa dhulka Somalida Ogadeeniya iyada oo isticmaalaysa kooxda Jwxo-shiil. Dhibaatadaas ayaa waxaa ay xukuumada Eritrea u soo marin jirtay Jwxo-shiil xuduuda dheer ee dhulka Somalida Ogadeeniya la leeyahay dalka Somali, gaar ahaana labada maamul gabaleed ee Somaliland iyo Puntland.
Xidhiidh sokeeye oo ay Itobiya la yeelatay maamul gabaleedyadan ayaa waxaa Itobiya u suurto gashay in ay gayso ciidamo labada maamul gabaleed waa Somali land iyo Puntland, waxaana haatan suurto gal ah in ay soo af jaranto fara galintii ay xukuumada Eritrea ku haysay dhulka Somalida Ogadeeniya iyo waliba taageeradii ay siin jirtay budh cad badeeda Somaliyeed.
Hadaba, sidda ay sheegayaan wararka ka imanaya dalka Eritrea, waxaa kulmay Jwxo-shiil iyo Iseyas Afwerki oo isagu u yeedha Jwxo-shiil, waxaana la sheegayaa in Jwxo-shiil loo sheegay in uu qaraxyo ka sameeyo magaalooyinka uu ka kooban yahay dhulka Somalida Ogadeeniya, gaar ahaana labada gabal ee Qoraxeey iyo Doolo oo ah gabalo aad looga neceb yahay kooxda Jwxo-shiil. Labadan gabal oo ahaa kuwa ugu taageerada badnaa ururka ONLF, ayaa waxay xiligan fahmeen in ayna jirin urur la taageeri karo, muujiyeyna taageero ay u hayaan dawlada Itobiya.
Qaraxyada laga soo abaabulayo Caasmara, ayuu Jwxo-shiil uga talo gashan yahay in uu iskaga hor keeno dadweynaha degan gabaladaas iyo ciidamada maamulka Kaalinka 5aad, ka dib kolka ay dhacaan qaraxyo, waxaa la xidhxidhi dadka magaalooyinka degan, arintaas oo faa,iido u ah Jwxo-shiil iyo xukuumada Eritrea. Abaabulka qaraxyada ayaa qorshihiisu dhamaaday, sida laga soo sheegayo Eritrea, waana dhibaato kale oo ka mid ah dhibaatooyinka uu Jwxo-shiil sida tooska ah ula beegsanayo dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Waxaa loogu talo galay in ay dad badani ka caraan dhulka oo ay galaan dariska sida Puntland iyo Somaliland, dabadeedna ay Puntland bixiso arimo ay kaga hor tagayso sugida nabad galiyadeeda sidaasina uu ku bilowdo dhibaato ka dhex abuuranta iyana shacabka Puntland iyo Somalida Ogadeeniya.
Qorshahan, ayey xukuumada Eritrea kaga jawaabaysaa, talaabooyinkii ay qaaday maamul gabaleedka Puntland oo ay ku xakamaysay dhaqdhaqaaqyadii ay ka samayn jirtay xukuumada Eritrea iyada oo adeegsanaysa kooxda Jwxo-shiil.